Man United Oo Looga Diday In Ay Xitaa Ku Dhamaysan Kari Waayaan 6-da Boos Ee Ugu Sareeya Premier League – Kooxda.com
HomePremier LeagueMan United Oo Looga Diday In Ay Xitaa Ku Dhamaysan Kari Waayaan 6-da Boos Ee Ugu Sareeya Premier League
Man United Oo Looga Diday In Ay Xitaa Ku Dhamaysan Kari Waayaan 6-da Boos Ee Ugu Sareeya Premier League
Kooxda Man United ayaa looga digay in ay xitaa ku dhamaysan waayaan 6-da boos ee ugu sareeya horyaalka premier League xilli ciyaareedkan kadib markii 4 kulan laga ciyaaray xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka premier League.
Xiddigii hore ee kooxda Man United Michael Owen ayaa aaminsan in ayna Man United ku dhamaysan doonin 6-da boos ee ugu sareeya horyaalka premier League xilli ciyaareedkan sabab la xidhiidha qaabkii xumaa ee ay ku bilowdeen horyaalka premier League.
Owen ayaa sheegay in ay Man United u dagaalami doonto in ay xilli ciyaareedkan ku dhamaysato 6-da boos ee ugu sareeya xilli ciyaareedkan hadii ayna fiicnayn natiijooyinka ay helayaan.
kooxda tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa xilli ciyaareedkii hore ku dhamaystay booska 6-aad ee kala saraynta horyaalka premier League kadib markii ay si xun ku dhamaysteen xilli ciyaareedka taas oo keentay in ay seegaan champions League xilli ciyaareedkan.
Man United ayaan xilli ciyaareedkan ku bilaaban si fiican iyaga oo kaliya hal guul gaadhay 4-tii kulan ee ay ilaa haatan ciyaartay.
Owen ayaana sheegay in ay United leedahay tayo ay ugu dhamaysan karto 4-ta boos ee ugu sareeya iskaba daa 6-da boos ee ugu sareeya.
Laakiin qirtay in ay jiraan kooxo kale oo doonaya in ay ku dhamaystaan 6-da boos ee ugu sareeya horyaalka premier League.
“Waa la yaab sow ma ahan, sababta oo ah waxa jira dad badan oo sheegayay in ay United ku dhamaysan karto 4-ta boos ee ugu sareeya bilowgii xilli ciyaareedkan”ayuu Owen u sheegay ESPN.
“Haatan kadib markii ay si xun ku bilaabatay xilli ciyaareedka waxa uu qof walba leeyahay miyay ku dhamaysan doontaa kaalmaha 6-da ugu sareeya?.
“Dabcan way ku dhamaysan karaan, wali waxa ay ku dhamaysan karaan 4-ta boos ee ugu sareeya laakiin waa hadii ay kulamada soo socda helaan natiijooyin fiican”.
“Laakiin waxa jira kooxo badan oo haatan doonaya in ay soo jabiyaan 6-da boos ee ugu sareeya waana la arki doonaa waxa dhaca”.
“Hadii ay ku sii jiraan natiijada haatan xitaa kuma dhamaysan doonto 6-da boos ee ugu sareeya horyaalka”.
Xulka Qaranka Somalia Oo Guuldaro Madax-Xanuun Leh Kala Kulmay Zimbabwe Iskana Khasaariyay Fursad Ay Taariikh Ku Samayn Lahaayeen